आईपीएल : फाइनल खेल आज, गुजरात र राजस्थानमा कसको पल्ला भारी ? – Upahar Khabar
आईपीएल : फाइनल खेल आज, गुजरात र राजस्थानमा कसको पल्ला भारी ?
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार १५:३८ May 29, 2022
काठमाडौँ – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको फाइनल खेल आज (आइतबार) हुँदैछ । अहमाबादस्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुने उपाधि भिडन्तमा गुजरात टाइटान्स र राजस्थान रोयल्स प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ८ ;१५ बाट सुरु हुनेछ । पहिलो सिजन खेलेर फाइनल पुग्न सफल गुजरात उपाधि जित्दै इतिहास रच्न चाहन्छ ।
गुजरातले यो सिजनबाट आइपीएलमा डेब्यू गरेको हो । त्यसैले पहिलो सिजन नै उपाधि आफ्नो पक्षमा पार्ने गुजरातको योजना छ । यता राजस्थान पनि आजको खेलमा सजह जित निकाल्दै प्रतियोगिताको दोस्रो उपाधि जित्ने योनजामा छ । राजस्थानले सन् २००८ मा उपाधि जितेको थियो ।
त्यसैले राजस्थानलाई उपाधि जित्ने मौका छ । दुई टोलीबीच यसै सिजन भएका दुई खेलमा गुजरातले जित निकालेको थियो । लिग चरणको खेलमा राजस्थानमाथि ३७ रनको जित निकालेको गुजरातले पहिलो क्वालिफायर्समा ७ विकेटको जित निकालेको थियो ।
सम्पर्कविहीन विमानमा एकै परिवारका ४ जना सवार